Wax ka beddelka ku iman kara xukumada dadka iyadoo khamri-qabsan wada baabuurta - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Gorm Kallestad / TT.
Wax ka beddelka ku iman kara xukumada dadka iyadoo khamri-qabsan wada baabuurta
La daabacay torsdag 30 januari 2014 kl 12.53
Waxaa laga yaaba in ay sharcidarro noqoto in qofka lagu qabto in uu baabuur wado isagoo khamri cabsan lagu rido xukun iyo batantaha laga qaado labadaba. Sidaas awgeed ayey hadda dhici kartaa in dad badan oo khamri cabsanaa ama baabuur xawli sare ku wadey loo soo celiyo batantayaashoodii.
Maxkamado iswiidhish ah ayaa hadda baaraya in ay waafaqsan tahay sharciga u degsan Midowga Yurub in qof la isugu daro ciqaab iyo in batantaha laga xayuubiyo. Sidaasna waxaa qoray wargeyska Dagens Nyheter.
Qaraarka Midowga Yurub u yaal ayaa mamnuucaya in qof laba goor lagu ciqaabo isla hal dembi.
Xilligii ciidda masiixiga ka hor ayey maxkamadda degmada Helsingborg gacanta ku sayro laba dacwo oo ku saabsanaa falal baabuur lagu wadey iyadoo si xun khamro loo cabsan yahay. Maxkamaddu waxay go’aankeeda ku saleysey in dadkaas dacwadaha lagu soo oogey horey loogu xukumay in shatiyada ama batantayaasha laga xayuubiyo. Sidaas awgeed ayey maxkamaddu ugu turjuntay in ay heleen ciqaabtii ay muteysteen.
Dacwooyinka noocaan ahi waxay sannad walba saameeyaan tobanaan kun oo dad ah. Sannadkii 2013 waxaa dib loo la noqday batantayaal tiradoodu gaareyso ilaa 40000. In ku dhow 7500 oo ka mid ah dareewaladaasi waxay galeen dembiyo la xiriira baabuur-wadid iyadoo khamri la cabsan yahay, halka in ku dhow 21000 ay ahaayeen baabuur la wadey xawli xad-dhaaf ah.